15/05/2019 lin htet မိုးလေဝသ သတင်း 0
ပ ထ မ ဦး စွာ အ နေ နဲ့ မြန် မာ နိုင် ငံ အ တွင်း မှာ ဘာ ကြောင့် င လျင် လှုပ် ရ လဲ ဆို တာ မှာ အ ကြောင်း ကြီး နှစ်ချက် ရှိ နေ ပါ တယ်….
(၁) အိ န္ဒိ ယ နိုင် ငံ မှ မြန် မာ နိုင် ငံ အ တွင်း ရွေ့ လျား လာ တဲ့ အိ န္ဒိ ယ ပြတ် ရွေ့ မြေ ထု…
(၂) စစ် ကိုင်း ပြတ် ရွေ့ ကြော ဖြစ် တဲ့ မြန် မာ နိုင် ငံ အ တွင်း မှ အ နောက် ဘက် ကို ဦး တည် ရွေ့ လျား နေ တဲ့ ပြတ်ရွေ့ မြေ ထု…
စ တဲ့ အ ကြောင်း ကြီး နှစ် ချက် ကြောင့် မြန် မာ နိုင် ငံ အ တွင်း မှာ င လျင် များ လှုပ် နေ ရ ခြင်း ဖြစ် ပါ တယ် ဆိုတာ ကို VOA သ တင်း ဌာ န မှ ဒေါ် ခင် မျိုး သက် မှ မေး မြန်း အင် တာ ဗျူး ထား ပြီး မြန် မာ နိုင် ငံ င လျင်ကော် မ တီ နာ ယ က ဒေါက် တာ ဦး သိန်း ဖြေ ကြား ထား ပါ တယ်….
(၂) မန္တလေးတိုင်းအတွင်းမှာဆိုရင်ဖြင့်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေဖြင့်အများဆုံးခံရဖွယ်ရှိပါတယ်။ရစ်ချက်တာစကေး၉– ၁၀အထိအောင်လှုပ်နိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်….
(၃) နေပြည်တော်အနေဖြင့်တော့ပျဉ်းမနားထက်စာလျှင်ပို၍ခံရဖွယ်ရှိပါတယ်။ပျဉ်းမနားကစစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ကြောနှင့်၁၀ မိုင်လောက်နီးကပ်ပေမယ့်နေပြည်တော်၏တစ်ချို့နေရာတွေက၁–၂မိုင်လောက်အထိကပ်နေတဲ့နေရာတွေရှိနေပါတယ်….
စတဲ့မြို့ကြီးတွေဟာငလျင်ဒဏ်ခံရဖွယ် ရှိပါကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံငလျင်ကော်မတီနာယကဦးသိန်းပြောကြားသွားချက်ကိုစေတနာရှေ့ထားမေတ္တာထားကာ သတ္တဝါအများဘေးအန္တရယ်မှကြိုတင် ကာကွယ်ရှောင်ရှားလွတ်မြောက် နိုင်ပါ စေ ကြောင်းကရုဏာထားကာ ရေးသားအသိပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
ပ ထ မ ဦး စှာ အ နေ နဲ့ မွနျ မာ နိုငျ ငံ အ တှငျး မှာ ဘာ ကွောငျ့ င လငျြ လှုပျ ရ လဲ ဆို တာ မှာ အ ကွောငျး ကွီး နှဈခကျြ ရှိ နေ ပါ တယျ….
(၁) အိ န်ဒိ ယ နိုငျ ငံ မှ မွနျ မာ နိုငျ ငံ အ တှငျး ရှေ့ လြား လာ တဲ့ အိ န်ဒိ ယ ပွတျ ရှေ့ မွေ ထု…
(၂) စဈ ကိုငျး ပွတျ ရှေ့ ကွော ဖွဈ တဲ့ မွနျ မာ နိုငျ ငံ အ တှငျး မှ အ နောကျ ဘကျ ကို ဦး တညျ ရှေ့ လြား နေ တဲ့ ပွတျရှေ့ မွေ ထု…
စ တဲ့ အ ကွောငျး ကွီး နှဈ ခကျြ ကွောငျ့ မွနျ မာ နိုငျ ငံ အ တှငျး မှာ င လငျြ မြား လှုပျ နေ ရ ခွငျး ဖွဈ ပါ တယျ ဆိုတာ ကို VOA သ တငျး ဌာ န မှ ဒျေါ ခငျ မြိုး သကျ မှ မေး မွနျး အငျ တာ ဗြူး ထား ပွီး မွနျ မာ နိုငျ ငံ င လငျြကျော မ တီ နာ ယ က ဒေါကျ တာ ဦး သိနျး ဖွေ ကွား ထား ပါ တယျ….
(၂) မန်တလေးတိုငျးအတှငျးမှာဆိုရငျဖွငျ့တဈနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာအနဖွေငျ့အမြားဆုံးခံရဖှယျရှိပါတယျ။ရဈခကျြတာစကေး၉– ၁၀အထိအောငျလှုပျနိုငျဖှယျရှိပါတယျ….
(၃) နပွေညျတျောအနဖွေငျ့တော့ပဉျြးမနားထကျစာလြှငျပို၍ခံရဖှယျရှိပါတယျ။ပဉျြးမနားကစဈကိုငျးပွတျရှကွေ့ောနှငျ့၁၀ မိုငျလောကျနီးကပျပမေယျ့နပွေညျတျော၏တဈခြို့နရောတှကေ၁–၂မိုငျလောကျအထိကပျနတေဲ့နရောတှရှေိနပေါတယျ….
စတဲ့မွို့ကွီးတှဟောငလငျြဒဏျခံရဖှယျ ရှိပါကွောငျးမွနျမာနိုငျငံငလငျြကျောမတီနာယကဦးသိနျးပွောကွားသှားခကျြကိုစတေနာရှထေ့ားမတ်ေတာထားကာ သတ်တဝါအမြားဘေးအန်တရယျမှကွိုတငျ ကာကှယျရှောငျရှားလှတျမွောကျ နိုငျပါ စေ ကွောငျးကရုဏာထားကာ ရေးသားအသိပေးလိုကျရပါတယျခငျဗြာ။
ပြည်ပ ရောက် မြန်မာ လုပ်သားတွေရဲ့ ရင်ထဲကို တည့်တည့် ထိမှန် ခဲ့တဲ့ ယုန်လေးရဲ့ အိမ်ပြန်ချင်တယ် သီချင်း Video